Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Mpanjaka Saodiana Abdul Aziz Falconry Festival dia mamaky firaketana vaovao momba ny Guinness
King Abdul Aziz Falconry Festival dia nambara ho fifaninanana hazakazaka lehibe falcon lehibe indrindra eran-tany miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ireo fecon 1723 izay nifaninana nandritra ny 10 andro (25 Jan - 3 feb), hoy ny tatitra nataon'ny Guinness Book of Records.
Ny solontena ofisialin'ny GBR, Shida Subasi Jamissi, dia nanatitra ny antontan-taratasy ofisialy manamarina ny fisoratana anarana amin'ny festival amin'ny GBR ho an'ny talen'ny ekipa Saudi Falcons Club Hossam bin Abdul Mohsen Al-Hazimi any Malham, avaratry Riyadh.
Ny fanambaràna an-tsoratra an'izao tontolo izao dia zava-bitan'ny Saodiana vaovao tamin'ny fetiben'ny falconry lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny loka mitentina SR 17,630,000, eo afovoan'ny fandraisana anjaran'ireo falconer avy any Saudi Arabia, GCC ary izao tontolo izao.
"Voninahitra iray ny manatrika ny fifaninanana SFC, izay nahitana lesoka 1,723 XNUMX, sokajy vaovao voarakitra araka ny fenitra iraisam-pirenena," hoy i Jamesi.
“Ny fenitra ekena dia milaza fa tsy tokony hisy atahorana ny ainy ary ny falcon rehetra mandray anjara dia tokony hilamina. Taorian'ny nahazoako ny isa marina avy amin'ny Statistics Dept., azoko atao ny manamarina fa ny SFC dia voasoratra ara-panjakana tao amin'ny GBR tamin'ny alalàn'ny 1723, toy ny fifaninanana falcon lehibe indrindra eran-tany eto Riyadh tamin'ny 3 Febroary 2019, ”hoy ihany izy.
Nikarakara fifaninanana Al Melwah 400 metatra ny SFC izay nahitana boriborintany ho an'ny falcon Saudi sy fihodinana iraisam-pirenena, raha 13 kosa ny amboaran-kapoaka notontosaina ny alahady hifidianana mpandresy 39. Ireo mpandresy amin'ny fihodinana tsirairay dia hahazo SR 500,000, raha ny toerana faharoa sy fahatelo kosa dia hahazo 200,000 SR ary 100,000 SR.